सेरोफेरो : March 2013
बा बाँचेका भए कति खुशी हुन्थे
'खुशीको आँशु के हो केहि थाहा थिएन' यसपाली एसएलसी पास गरेका घरेलु श्रमिक कविराज लामाले सोमबार भने, 'आजै बिहान झर्यो ।'
डुकुछाप ललितपुरका १७ वर्षो लामा घरको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण ८ वर्षअघि राजधानी झरे । कुपण्डोलको एक घरमा काम गर्दै नजिकैको प्रगति शिक्षा सदन माविमा पढ्न थाले । २०५८ मा बाबा बितेपछि उनलाई थप ठूलो चोट पर्यो ।
'गाउँमा खानलाउन गाह्रो भएपछि आमा र भाइबहिनी पनि यही आए' लामाले भने, 'सबैले फरक फरक घरमा काम गर्न थाल्यौं ।' उनकी कान्छी बहिनी भोटेबहालको घरमा काम गर्छन। मानसिक अवस्था कमजोर भएकी माइली दिदी र भाई आमासँगै सानेपा, काठमाडौं बस्छन् । राजधानीमा नै रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यबाट टाढा बस्नुपर्ने उनको बाध्यता हो । बाध्यताकाबीच पढ्नु र बढनु उनको रहर ।
Labels: टुक्राटाक्री, पात्रकथा
आठ आठघण्टा बन्द उपहार
पोखराबाट काठमाडौं तिर हुँइकिएको माइक्रोबस आइतबार चितवनको फिस्लिङमा झयाप्प रोकिएपछि हाम्रो दुखद दिन सुरू भयो । एकीकृत माओवादीको भातृ संगठन तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले अप्रत्यासित बन्द आयोजना गरेको रहेछ । त्यो पनि बिहान सात बजे देखि साँझ ६ बजे सम्म । प्राय यात्रुले यात्रा अगावै बिहान दश बजेबाट दुइघण्टा नेपालबन्द हुँदैछ भन्ने सुनेका रहेछन् । जहाँ बन्द होला त्यहीँ दर्ुइघण्टा बिताउने योजनामा बिहान सात बजे निस्केका हामीले थप ६ घण्टाको गणतान्त्रिक बोनस पायौं । बिहान पाँचै बजे काठमाडौंका लागि छुटेका गाडीले भने फिस्लिङमा 'दश घण्टा बन्द' उपहार पाए ।
सबैलाई सकेसम्म चाँडो गन्तव्यमा पुग्नको हतारो थियो । बिहानी खानाको कुरै नगरौं धेरै यात्रुले चिया पनि पिउन पाएका थिएनन् । फिस्लिङको फलफुल तथा तरकारी संकलन केन्द्र नजिकै रूखका मुढा तर्ेसाएर आन्दोलनकारीको झण्डा गाडिएको थियो । चार पाँच आन्दोलनकारी सडक छेउ चौतारोमा सुस्ताएर आँखा ठूला ठूला पार्दै थिए । बन्दगर्न राखिएका ढुङ्गामुढा भन्दा केही मिटर पर काठमाडौं कुद्न तम्सिएका गाडीहरूको एकतफिर् लस्कर सुरू भएको थियो । काठमाडौंबाट बाहिरी जिल्ला निस्किएका गाडीहरूलाई मलेखु नेरै रोकेर राखिएको आयोजक बताउथे । बन्दगर्न सडकमा राखिएका साना साना ढुङ्गापनि गाडीका निम्ति पहाड झै खडा भएका थिए ।
'आठ आठघण्टा सम्म के गरेर बस्ने ?,' आक्रोशित यात्रुको गन्थन सुरू भयो ।
लोडसेडिङ जस्तो माया
हाम्रो माया चाकु जस्तो गुलियो होस् तर कालो नहोस्
हाम्रो माया सखरखण्ड र तरुल जस्तो फैलियोस, झांगियोस् तर नमरोस
हाम्रो माया स्वास्थानी जस्तो सधैं दोहोर्याएर पढ्न पाइयोस्, पढेर मिल्काउन नपरोस्
तिलको लड्डु जस्तो साह्रो होस् प्रेमको गाँठो तर कसार जस्तो टोक्नै गाह्रो नहोस्
सूर्य ग्रहण जस्तो वर्षवर्षा मात्र आउने नहोस् हाम्रो माया
लोडसेडिङ जस्तो हरपल, हर क्षण साथ दिने होस् !!!
हरपल, हर क्षण साथ दिने होस् !!!
(२०६६-१०-१, कालिमाटी तरकारी बजार, तरूल सखरखण्ड व्यवस्थापन समिती) :)
भर्ना खुलेछ !
चाहेको रकम असुल्न पाइने सीत्तैमा मागेर हसुर्न पाइने
रीस उठेमा छाला तार्दीन पाइने बङ्गारा गनेर झार्दीन पाइने
सी।डी।ओ प्रहरी कुट्न पाइने कार्वाहीमा नपरि छुट्न पाइने
आफ्नो वीरुद्ध बोल्नेलाइ धान चुटेझै चुट्न पाइने
मुर्खको हातमा कानुन फुलेछ आउनुहोस् नयाँ भर्ना खुलेछ ।